गज्जब Archives - Page2of6- Naya Patrika
सेतीदोभानमा भेटेको कथा
कल्पना श्रेष्ठ कल्पपुञ्ज, आख्यानकार, काठमाडाैँ, १७ चैत - स्कुलमा पढ्थेँ । त्यतिवेला आमाको एकजना साथी थिइन् । उनका श्रीमान् रक्सीका अम्मली । रक्सी खाएरै होला आन्द्राको क्यान्सर भएछ । उनी मेरी आमासँग भन्थिन्, ‘श्रीमान् राति निदाउन सक्दैनन् । म निदाइरहेकी छु भने पनि राति एक–दुई बजे लठ्ठीले मेरो पेटमा दुख्ने गरी घोचेर उठाउँछन् ।’ आफ्नो पीडामा श्रीमती नछट्पटिएको भनेर त्यसो गर्दा रहेछन् । आफू त...
काठमाडौं हङकङजस्तो बन्न सय वर्ष लाग्छ : हाङयुग अज्ञात
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - लेखक हाङयुग अज्ञात एक दशकदेखि हङकङ बसिरहेका छन् । खासगरी कविता र सिद्धान्तका पुस्तक लेख्ने उनी साहित्यिक आन्दोलन सिर्जनशील अराजकताका एक सदस्य हुन् । केही दिनअघि उनी सिर्जनशील अराजकताको शिखरवार्ताका लागि भन्दै नेपाल आएका थिए । अहिले हङकङ फर्किसकेका हाङयुगसँग आन्दोलन र उनको साहित्यिक यात्राको सन्दर्भमा गज्जबका प्रकाश गुरागाईंले गरेको संवाद : हङकङ...
‘मेरा लागि तिजमा व्रत बस्ने भैँसेपाटीकी युवती’
, - पलसँग फ्यान संवाद- परीक्षा नै छाडेर भेट्न आउने फ्यान केही वर्षअघि म गुवाहटी गएको थिएँ । त्यहाँ नेपाली मूलका एकजना विद्यार्थी मेरो फ्यान हुनुहुँदो रहेछ । म आएको भन्ने थाहा पाएपछि उहाँले इन्जिनियरिङको परीक्षा नै छाडेर भेट्न आउनुभयो । अरू साथीहरूले किन परीक्षा छाडेको भनेर सोध्दा ‘पल दाइ आउनुभएकाले भेट्न...
आफूलाई संसारको राम्रो मान्छे ठान्छु : हरिवंश आचार्य
महेश तिमल्सिना/नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - घमन्डी छैन हुन त आफ्नो राम्रो पक्ष या नराम्रो पक्ष अरूले पहिल्याउने हो । तैपनि म सबैसँग मिलनसार नै छु । मेरो कुरालाई अरूले पनि सितिमिति नकार्न सक्दैनन् । किनभने म चाहिनेभन्दा बढी कुरा गर्दिनँ । मैले कलाकारिता क्षेत्रमा धेरै समय बिताइसकेँ। तैपनि म घमन्ड गर्दिनँ । कलाकारिता मात्र होइन । अन्य कुरामा पनि घमन्ड गर्दिनँ ।...
नेपाली क्रिकेटको आगामी बाटो सहज छैन: विनोद दास, पूर्वकप्तान
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - क्रिकेटमा आबद्धताको हिसाबले वान डेको मान्यता पाउन लामो समय लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्न थालेको पनि २२ वर्ष भयो । यो समय लामै हो । तर, जुन किसिमको व्यवस्थापन छ, जुन हिसाबले क्रिकेट चलाइराखेका छौँ । त्यस हिसाबले भने हामीले आफूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ । नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूको मामिलामा लक्की साबित...
नेपाली क्रिकेटको ‘वान डे’ साख जोगिएला ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १७ चैत - ३० वर्षे क्रिकेट इतिहासमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ, एकदिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएर । अबका चार वर्ष नेपालले एकदिवसीय र लिस्ट ए मान्यता पाएका राष्ट्रसँग खेल्नुका साथै विश्व क्रिकेट लिग, एसिया कप र इन्टरकन्टिनेन्टल कपजस्ता ठूला प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । तर, चार वर्षपछि यो साख जोगाउन भने सजिलो छैन ।...
मलाई उच्छृंखल गीत गाएर हिट हुनुछैन : अास्था
कृष्ण कट्टेल, काठमाडाैं - नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय ‘भाइरल’ गीतको खोजी हुने गरेको छ । कस्तो गीत गाउँदा दर्शक बढी बटुल्न सकिन्छ र सांगीतिक मेला–महोत्सवतिर अवसर पाइन्छ भन्नेमा कलाकारको प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । यही संगीत बजारमा केही गायक–गायिकाले भने सर्जकको शब्द छानेर गाउने गरेका छन् । उच्छृंखल शब्दकै कारण आफूले गाएकाभन्दा बढी संख्यामा गीत गाउन अस्वीकार...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १६ चैत - हरिणको सिङबाट रगत झिक्ने प्रक्रिया आफैँमा पासविक हो । हरिणलाई नलठ्याईकन आराले काटिन्छ सिङ । हरिणको टाउकोलाई काठमा अड्याएर बुट लगाएका पहलमानले थिच्छन् भने सिङलाई डोरीले बाँधेर तानिन्छ । रगत झिक्नेक्रममा कतिपय हरिणको मृत्यु हुन्छ । रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन शक्तिका कारण जति विश्वभर चर्चामा छन् त्यति नै फिटनेसका कारण...
ठूला आँखा भएकी केटी मनपर्छ : बल्छी धुर्वे, कलाकार
, - दुब्ली केटी मनपर्दैन युवती त्यसै पनि सुन्दर नै हुन्छन् । हेर्ने आँखाले फरक पार्ने हो जस्तो लाग्छ । कसैलाई कस्तो, कसैलाई कस्तो मनपर्ने हुन्छ । मेरो जीवनसाथी अथवा कसैलाई मनपराउँदा त आफ्नै रोजाइअनुसारको राम्रो होस् भन्ने जोकोहीको चाहना हुन्छ । मलाई पनि राम्री होस् भन्ने चाहना त अवश्य पनि छ...
प्रदेश ३ मा पैसा अथाह छ, टिप्न जान्नुपर्छ : कैलाश ढुंगेल
, - सम्भावना प्रदेश ३ मा १३ जिल्ला छन् । स्रोत र साधनको हिसाबले यो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । उद्योग, जलस्रोत, कृषि, पशुपालन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रदेश ३ का स्रोत हुन् । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा यही प्रदेशमा छन् । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत धरोहरहरू प्रदेश ३ मा बढी छन् ।...
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ - विगत खोतल्दा गायिका रमिला न्यौपानेको पनि संघर्षका पाना पल्टिए । झन्डै १२ वर्षअघिको संघर्ष । जतिवेला उनी गायन क्षेत्रमा आफ्नो पाइला राख्ने ठाउँको खोजीमा थिइन् । आजभोलि उनी मेला, महोत्सवमा व्यस्त भएको वेला एकै महिनामा १५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछिन् । एकै महिनामा लाखौँ कमाउँदा खुसी त हुन्छिन्, तर त्यति धेरै खुसी हुन सक्दिनन्, जति...
तीन दिदीबहिनीले मन पराएपछि…
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ - धीरज राई चर्चित पपगायक हुन् । उनलाई कुनैवेला ‘नेपाली माइकल ज्याक्सन’का रूपमा चर्चा गरिन्थ्यो । कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दै गर्दा ‘लुकी–लुकी आँखा’ बोलको गीत गाएर चर्चामा आएका धीरजले हालसम्म २ सयभन्दा धेरै गीतमा स्वर दिएका छन् । उनका फ्यान पनि उत्तिकै छन् । केही फ्यानहरुसँग उनका रमाइला संस्मरण जोडिएका...
डाक्टर बन्न नसकेपछि मास्टर भएँ : कृष्णबहादुर महरा
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १० चैत - एसएलसीमा प्रथम श्रेणी हुन १ नम्बरले रोक्यो मेरो विद्यार्थीजीवनको सुरुवात रोल्पाको बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट भएको हो । मैले त्यहीँबाट नै अक्षर सिक्न सुरु गरेँ । बिस्तारै अक्षर सिक्दै त्यही विद्यालयको प्रांगणमा हाँस्दै, खेल्दै, रमाउँदै कक्षा १० सम्मको शिक्षा हासिल गरेँ । त्यही विद्यालयबाट ०३३ मा दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण भएँ...
विनोद भण्डारीको नजरमा नेपाली क्रिकेटर को, कस्ता ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ, ८ चैत - यतिवेला नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सन् २०१९ को एकदिवसीय विश्वकपका लागि जिम्बाबेमा छनोट खेल खेलिरहेको छ । लामो समय राष्ट्रिय टोलीमा रहेका विनोद भण्डारी भने यो पटक टिममा अटाएनन् । राष्ट्रिय टोलीका सदस्य तथा आफ्ना सहकर्मीहरूको बानी र स्वभावबारे उनले गज्जबलाई बताएका छन् । श्रीलोचन राजोपाध्यायको रिपोर्ट : जिम्बाबेमा सन्...
ग्रुपच्याटले गर्‍याे जीवन नै चट्
टेकराज थामी, काठमाडाैँ, ४ चैत - वाकोट सूर्यगढी–३ का १५ वर्षीय कुमार सुचीकार । फेसबुक आइडीमा उनको नाम ‘डेभिल’ । यही नामबाट उनले फेसबुकमा ‘फ्रेन्ड सर्च’ गर्थे । ‘रिक्वेस्ट’ पठाउँथे । ‘एसेप्ट’पछि घन्टौँ गफिन्थे । कक्षा १० मा पढ्दै थिए । विद्यालयपछिको दैनिकी घन्टौँ च्याट गरेरै बित्थ्यो । यही क्रममा डेभिलको फेसबुक पेजमा एक किशोरीको फोटो...
कलेजमा कसैसँग प्रेम बसेनः सुबिन भट्टरार्इ, लेखक
महेश तिमल्सिना , काठमाडाैँ, ४ चैत - सुबिन भट्टराई चर्चित युवा साहित्यकार हुन् । उपन्यास ‘समर लभ’बाट चर्चामा आएका उनीका साया, मनसुनजस्ता उपन्यास पनि लोकप्रिय छन् । विद्यार्थीजीवनदेखि नै साहित्यमा रुचि राख्ने भट्टराईको विद्यार्थीजीवन अर्थात् कलेजका दिनबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेँ मेरो विद्यार्थीजीवनको सुरुवात काठमाडौंबाटै भएको हो । धोबीधारामा रहेको राष्ट्रिय...
युवतीहरूले छातीमा टोकिदिए : नायक विराज भट्ट
, काठमाडाैँ, ३ चैत - विराज भट्टलाई एक्सन नायकका रूपमा चिनिन्छ । चलचित्र ‘खुकुरी’बाट डेब्यु गरेका उनले थुप्रै भोजपुरी फिल्ममा पनि अभिनय गरेका छन् । यतिवेला उनी भोजपुरी चलचित्रमा स्टार पनि बनिसकेका छन् । पछिल्लो समय भोजपुरी चलचित्रमा व्यस्त रहेका विराजका फ्यान पनि त्यत्तिकै छन् । कतिपय फ्यान यस्ता छन् जसलाई विराज कहिल्यै भुल्न सक्दैनन्...
च्याम्पियन्स लिगका रोमाञ्चक र अविष्मरणीय कमब्याक
निर्वान झापाली/नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, १ चैत - युनियन अफ युरोपियन फुटबल एसोसिएसन (युइएफए)को आयोजनामा युरोप महादेशमा रहेका देशका शीर्ष लिगका शीर्ष क्लब सहभागी हुने च्याम्पियन्स लिग युरोपियन क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा हो । विश्वभर चर्चित च्याम्पियन्स लिग, सबैभन्दा बढी हेरिने वार्षिक खेलकुद प्रतिस्पर्धा हो । २०१२/१३ को च्याम्पियन्स लिग फाइनल प्रतियोगिता इतिहासकै सबैभन्दा धेरै हेरिएको थियो । सो खेल...
महेश तिमल्सिना, काठमाडाैँ, २६ फागुन - शिव श्रेष्ठ नेपाली चलचित्रका पुराना स्थापित नायक हुन् । उनलाई एक्सन किङ पनि भन्ने गरिन्छ । चलचित्र ‘जीवनरेखा’बाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका श्रेष्ठले थुप्रै चलचित्रमा काम गरेका छन् । उनले अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्र राम्रै व्यापार गर्न सफल पनि भए । एकताका चलचित्र क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेका श्रेष्ठका फ्यान पनि...
टेकराज थामी, काठमाडौ, २६ फागुन - नेपाली बजारमा दैनिक अढाई करोडको अवैध सुनको कारोबार हुन्छ । तस्करीको सुनले बजार ओगट्न थालेपछि बैंकहरूमार्फत आउने वैध सुनको कारोबार ओरालो लागेको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय दैनिक कम्तीमा ५ केजी अवैध सुन किनबेच भइरहेको छ । यो परिमाण अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा भने निक्कै कम हो...
कुन युरोपियन देशमा कस्तो शिक्षा प्रणाली ?
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं - नेपालीहरू विदेश अध्ययनका क्रममा युरोपियन देशमा समेत आकर्षित भएको पाइन्छ । युरोपका चर्चित देशहरूमा शैक्षिक प्रणाली र शुल्कमा धेरै विविधता रहेको छ । कतिपय देशमा शुल्क चर्को छ भने कुनैमा उच्च शिक्षासमेत निःशुल्क रहेको छ । केही देशमा नेपालबाट अध्ययन गर्न जान अंग्रेजी भाषामा दक्ष हुनुपर्छ भने कुनै देशले आइइलटिएसलगाएतका...
नुनुता राई, काठमाडाैं - कैलालीकी उमाकुमारी बादी कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ प्रदेश सभा सदस्य बनेकी छिन् । बादी समुदायको हकहितका लागि लड्दै आएकी उमाकुमारीको चर्चा ०६४ मा बादी समुदायका महिलाले गरेको आन्दोलनको नेतृत्व गरेदेखि भएको हो । त्यसवेला उनीहरूले भदौ १ गतेदेखि ४८ दिनसम्म अधिकारका लागि सिंहदरबारको पश्चिमढोकाअगाडि अर्धनग्न जुलुस निकालेर संघर्ष गरेका थिए । सरकारले...
नयाँ पत्रिका , काठमाडाैं - विश्वका चर्चित राजनीतिज्ञ आफ्ना विवादास्पद र अश्लील अभिव्यक्तिका कारण बारम्बार विवादित बन्ने गरेका छन् । सार्वजनिक समारोहमा अशोभनीय अभिव्यक्ति दिँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालवाला मन्त्रीले बारम्बार क्षमायाचना गर्नुपरेको छ । विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उनीहरू पटक पटक विवादमा तानिएका छन् । केही राजनीतिज्ञका अशोभनीय अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् : विपक्षी महिला निरसः...
बद्री पंगेनी, काठमाडाैं - सुनिता खनाल, कविकल्पना र म एउटैठाउँका हौँ, पाल्पाको रामपुरका । उनको आफन्तको घर हाम्रो घरनजिकै रहेछ । त्यहाँ मैले उनलाई देखेको थिएँ । भर्खर गाउँमा ट्याक्टर जान थालेको थियो । पानी पर्ने समयमा ट्याक्टर फसेको रहेछ त्यहाँ । म हेर्न गएँको थिएँ । उनी पनि आएकी रहिछिन् । सामान्य बोलचाल...
सुनिता खनाल, काठमाडाैं - मेरा लागि कविता हतियार हो । म समाजसँग कवितामार्फत संघर्ष गरिरहेको हुन्छु । त्यो संघर्षको सिलसिला चलेको लामो समय भइसकेको छ । जसकारण मेरा कविताका पाठक पनि बढेका छन् । कतिपय कार्यक्रममा जाँदा मेरा कृति खोज्ने र कृति प्रकाशनका लागि आग्रह गर्ने साथीहरूकै कारण ‘ओ नायक’ जन्मियो । हुन त मैले दुई वर्षअघि नै पुस्तक...
दीपेन्द्र सापकोटा, काठमाडाैं - म अहिले बिहान–बिहान अनामनगरमा नाटक सिकाउँछु । डिस्कोभरी योरसेल्फ कार्यक्रमसहित त्यहाँ ‘ज्ञ’ नामक नाट्यस्कुल खोलेको छु । नर्मल्ली शनिबार बिदा हुन्छ । त्यस्तै, हामी मण्डला र शिल्पी थिएटरमा नाटक मञ्चन गर्छौं । तर, त्यहाँ पनि एक ठाउँ सोमबार र एक ठाउँ मंगलबार बिदा छ । ‘गुरुकुल’ नाट्यशाला चलाउञ्जेल झनै बिजी भइन्थ्यो । बरु त्यो छाडेपछि करिब...
प्रेम गौतम, काठमाडाैं - चलचित्र विकास बोर्डमा आएदेखि नै क्रमिक रूपमा सुधारका काम थालेकी छु । दुई–चारवटा काम गर्न पाइयो भने नेपाली सिनेमाको ग्रोथ हुन्थ्यो । सबैले माग गरिरहेको चलचित्र इन्ड्रस्टीलाई आवश्यक बक्स अफिसको सुरुवात फागुन १ गतेबाट गरेका छौँ । बक्स अफिस सबै चलचित्रकर्मीहरूको माग हो । बक्स अफिस देशैभरिका सिंगल र मल्टिप्लेक्स...
ठूला नेताको प्यारो बन्न सकिनँ : मनीष सुमन
दीपेन्द्र सापकोटा/नयाँ पत्रिका, - [caption id="attachment_28751" align="alignnone" width="1700"] मनीष सुमन, राजपा सहसचिव तथा प्रदेश सांसद[/caption] मनीषजी हुन चाहन्नँ म हुनेखाने परिवारमा जन्मिएको व्यक्ति हुँ । तैपनि बाहिर प्रस्तुत हुँदा साधारण परिवारको जस्तो देखिन्छु । सधैँ सरल रूपमा प्रस्तुत हुन्छु । कतिपय अवस्थामा भएका गुणहरूलाई पनि लुकाएर झनै सरल हुन्छु । मेरो ‘ह्याभिचुअल एक्सन’ प्रस्तुत गर्छु । त्यसैले त मलाई...
श्रीलोचन राजोपाध्याय/प्रकाश कँडेल, काठमाडाैँ, १९ फागुन - पछिल्लो समय खेलाडीहरू खेल करिअरसँगै विभिन्न पेसा व्यवसायमा पनि आबद्ध भइरहेका छन् । अधिकांश खेलाडीको ‘साइड व्यवसाय’मा पनि लगानी छ । कतिपयले परिवारका सदस्यका नाममा सानोतिनो व्यवसाय सुरु गरेका छन् भने कतिले ठूलै लगानी गरेर काम गरिरहेका छन् । अधिकांशले खेलपछिको जीवनलाई व्यापार–व्यवसायमा लगाएका छन् । व्यावसायिक खेल खेलिरहेका खेलाडीले समेत वैकल्पिक पेसाका रूपमा...
महेश तिमल्सिना/नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ, १९ फागुन - अर्जुननरसिंह केसी कांग्रेसका नेता हुन् । विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीति सुरु गरेका केसी कक्षा १० पढ्दै विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष भएका थिए । यसका साथै, विभिन्न विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आए । विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा पटक–पटक जेल परेका केसीको विद्यार्थी जीवन विशेषगरी कलेजका दिनका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । प्रारम्भिक शिक्षा घरबाटै सिकेँ...